Novel Lover (၀တ္တုချစ်သူများအဖွဲ့) - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ Novel Lover (၀တ္တုချစ်သူများအဖွဲ့)
Cho Wut Yee (Wutyee Food House) မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
Latest Activity: May 10 မျှဝေမယ် Twitter
*တိုးတက်လာသော မြန်မာ့ ဘန်းစကားများ
Started by moesat. Last reply by မနောမယ် Jul 23, 2012. Vampire နဲ့ Dampir ဘာကွာလဲ ( နိဒါန်း)
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House). Last reply by မနောမယ် Jul 23, 2012. မှောင်ရိပ်ဝတ္တု အပိုင်း-၂ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House). Last reply by မနောမယ် Jul 23, 2012. မောင်းရင် မကြမ်းနဲ့ ၀တ္တုတို
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House). Last reply by မနောမယ် Jul 19, 2012. Gtalk နဲ့ ကြာ
Started by htet htet. Last reply by laminnge Jul 16, 2012. ၀ိဥာဉ်ပျော်တဲ့ညမှာခရီးထွက်မိသူ…. အပိုင်း (၂)
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Jinne Jul 7, 2012. သုံးခေတ် သုံးလီအလွှဲများ
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House). Last reply by shine grace moon Jun 17, 2012. အချစ်ဆုံးသူနဲ့ အချစ်ဦးသူ
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House). Last reply by ဖြူစင် May 7, 2012. ၀ိညဉ်ပျော်တဲ့ညမှာ ခရီးထွက်မိသူ အပိုင်း ၃ ဇာတ်သိမ်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by မြူ May 4, 2012. "ကျွန်တော် မသိသော ကောင်မလေး" ၀တ္တုတို
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House). Last reply by တစ်ကိုယ်တော်ရေးတဲ့ ABC Apr 28, 2012. ဖြူစင်စွာနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ဘ၀တစ်ချို့
Started by La Min Lay. Last reply by moenaing Dec 30, 2011. Friday, December 9, 2011 မျက်ရည်တွေငိုတဲ့မိန်းကလေး Twinkle
Started by mindatha. Last reply by April Flame Dec 12, 2011. ရီရတယ် စိတ်ပျော်တာပေါ့
Started by aye aye tun Nov 17, 2011. ၀တ္ထု အနုပညာ
Started by ရဲဂျာ Sep 14, 2011. ၀ိဥာဉ်ပျော်တဲ့ညမှာခရီးထွက်မိသူ…. အပိုင်း (၁)
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ပန်းရောင် Aug 31, 2011. မှောင်ရိပ် ၀တ္တုရှည်(အပိုင်း-၁)
Started by Cho Wut Yee (Wutyee Food House) Apr 29, 2011. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of Novel Lover (၀တ္တုချစ်သူများအဖွဲ့) to add comments!
Comment by အိမ်မက်ရှင်(မျိုးမာန်) on June 28, 2012 at 5:30am အရမ်းကြိုက်ပါတယ်.. Comment by ဖြူစင် on May 7, 2012 at 3:07pm အမလေး ကိုမိုးစက်ရယ် ကောင်းလိုက်တဲ့ဟာသ .....
အ၇မ်းကိုရယ်င်္ရတယ် Comment by sein kabar on April 28, 2012 at 6:21pm How r u? Comment by စိုင်းချစ်သူ on March 1, 2012 at 4:29pm စာဖတ်ရတာဝါသနာတော့အရမ်းပါပါတယ်..ဒါပေမဲ့ကွန်နရှင်က မကောင်းတော့ စောင့်ဖတ်ရတာမော ပါတယ် ... အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ .. Comment by pansagar on January 16, 2012 at 9:47pm ၇ယ်၇လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် moesatေ၇
Comment by yoonhlwarko on November 29, 2011 at 2:31pm အရမ်းကောင်းပါတယ် ရယ်ရတယ် Admin Comment by ၀ိဝိ on November 11, 2011 at 11:24pm Comment by yoke chaw on October 26, 2011 at 9:04am thank
Comment by အလွမ်းသင့်ပန်းချီ on October 25, 2011 at 3:08pm ကျန်တော်မသိသော ကောင်မလေး လို ၀တ္တုတိုလေးတွေ အ၇မ်းကြိုက်တယ် ဂျာ.. ထပ်တင်ပေးပါဦး... စောင့်မျှော်နေပါတယ်... Comment by သေမင်းတမန် on October 9, 2011 at 8:04pm thank par ‹ နောက်သို့
1. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)
8. snow myat
10. zayyar naing
11. Chit Snow
19. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★
လက်ဆောင်ပေးမယ် chit hnin phyu
လက်ဆောင်ပေးမယ် Hello Baby
လက်ဆောင်ပေးမယ် Hla Phyoe Wai
လက်ဆောင်ပေးမယ် Jack sparrow
လက်ဆောင်ပေးမယ် kaung ma lay
လက်ဆောင်ပေးမယ် kaung myat
လက်ဆောင်ပေးမယ် khaing may zon soe